I-Villa Ethengiswayo E-Chandkheda, e-Ahmedabad
Real Estate Listings: » Residential homes » Villas » IN » Gujarat » Ahmedabad » Chandkheda » I-Villa Ethengiswayo E-Chandkheda, e-Ahmedabad1
Impahla engu-4 bhk iyatholakala ukuthengiswa eResidency 1 and 2, Chandkheda, Ahmedabad. Inendawo eyakhelwe ngaphakathi engama-3700 sqft futhi inentengo kuma-Rs. 2.31 amakhilogremu Ine-tv eyi-1, usofa o-1, usofa o-1 netafula lokudlela eli-1. Ibuye ibe nokuxhuma kwegesi okungu-1, i-1 ac nombhede ongu-1. Kusenyakatho ntshonalanga ebheke impahla. Sicela uxhumane neminye imininingwane.